Tofu ushizi (zokupheka)
Tofu, ogama zokupheka babe eyaziwa BC, othandwa kakhulu emazweni ase-Asia. Muva nje, waqala ukuthola labo abanamathela kwamanye amazwe.
Lo mkhiqizo eyingqayizivele, okuyinto ocebile kakhulu amaprotheni yemifino Yenziwe soy ubhontshisi. Inzuzo enkulu yalo mkhiqizo ukuthi unakho nhlobo ukunambitheka kanye sikuzuze kulezo imikhiqizo, okuyinto ngokuhlanganyela okulungiselelwe. Lo mkhiqizo esisemqoka ekudleni inyama futhi abantu abakhetha ukudla okunempilo.
Tofu, okuyinto zokupheka ngesikhathi zethu eziningi, kungenziwa ngezindlela ezihlukahlukene. Emazweni ase-Asia, avame ukuthi likhiqizwa ngokungeza fresh ashisayo soy ubisi ekhethekile ukuqina izidakamizwa - Nigar. Uqukethe amaminerali yemvelo - calcium sulfate. Ngokuvamile ukukhiqiza soy ushizi usebenzisa ezintweni ezihlukahlukene oxidizing (uviniga, kalamula). Ready okuletha kukhompiyutha izaqheqhe onomfutho ku briquettes obukhulu.
Tofu zokupheka okuyizinto ngokuvamile efana inqubo ukulungiselela avalele ushizi, ungakwazi kalula wenze ekhaya. Ngokuvamile i-ekwandiseni soy ushizi ukunambitheka kwanezelwa nalokho nati, izinongo ehlukahlukene, paprika. Basuke ungeze phambi compaction. Abanye abakhiqizi ukukhiqiza ushizi ngabhema.
Tofu siyahlukahluka ukungaguquguquki kanye indlela yokukhiqiza. ukuhlukanisa:
Kuvamile, kanzima - ushizi sasivumela awugqinsi, mozzarella-efana ukungaguquguquki. Kuyinto efanelekayo ezijulile ukuthosa kanye yokuwugazinga nge ukudla ezahlukene, ukubhema. Ngokuvamile it is ekhiqizwa nge izithasiselo ehlukahlukene. Ukuthamba ke ihlukaniswe ezimbili izinhlobo: Asian (eqhukethe amanzi, hhayi Friend too), entshonalanga (equkethe amanzi kancane kuyinto ayazika).
Soft (usilika) - ethambile kakhulu ukungaguquguquki ushizi-njengazo Pudding. Uqukethe esibalulekile amanzi. It is lisetshenziswe nososo, izitsha sweet, amasobho, ngoba ambalwa ukudla.
Ingabe ngithola - elinesimo iphunga okunoshukela.
Emazweni ase-Asia, kukhona izinhlobonhlobo eziningi lokhu ushizi. Elondolozwe ku cleaner yayo iphakethe ngamanzi. Unpasteurized ushizi esitolo endaweni epholile. Tofu wageza, uthele amanzi, ukuyishintsha Njalo ngemva kosuku olulodwa. Ngakho umkhiqizo zingagcinwa izinsuku ezingu-7. Gwema umnkantsha Tofu. Ngemva kwalokho, kuba nombala aphuzi. ushizi ezinjalo ngemva incibilikiswa iba mhlophe bese uba ukuthungwa sithambile futhi aqinile.
Izitsha best kwalo mkhiqizo: nososo, isobho, izitsha main zemifino nokusanhlamvu. Kusukela Uphudingi okulungiselelwa, ice cream, amakhekhe ubhake ophaya. Yini ukupheka Tofu ushizi - ke kuncike kuphela amehlo akho engqondo. Lo mkhiqizo ngeke zithole yonke akuthandayo: ezimuncu, ezinosawoti, ezinoshukela, okubabayo. Yena kalula esikhundleni amaqanda, inyama, ubisi ushizi, ubisi.
1. USoya kuba manzi te amahora 24, ngemva kwalokho amanzi amuncekela. Phakathi amanzi sifakwe emanzini ngokuvamile ukushintsha. 2 ubhontshisi evuvukele kukhona phansi e-grinder inyama kabili ne anezikhala esihle. Soy mass wathela amanzi (500 g soy kumele 1.5 L). Ingxube enyakaza kahle futhi bagcizelele 3:00. khama IMisa ngokusebenzisa izicubu obukhulu. Soy mass futhi kutsho e grinder, ngamanzi wathela bagcizelele 3 h. Khona-ke aphinde ngawakhamela ngokusebenzisa indwangu. Ekugcineni, 0.5 kg ubhontshisi owomile etholwe 3 amalitha ubisi. ubisi Soy kulethwa ngamathumba futhi ukutheleka isixazululo 0.5 tsp citric acid kanye 2 tbsp. iingobho zamanzi abilisiwe. Ngemva curd mass eyama on ngesihlungo embozwe ngendwangu, futhi ubekwe ijoka phezulu. ushizi selehlile is abeke kanye ijoka nesiqandisi. Ukuze asuse isicubu kumelwe moisten ushizi.
2. ubhontshisi ofakwe zigaywa e grinder inyama izikhathi 2 futhi ugcwele amanzi (0.5 kg ubhontshisi owomile kumele 1.5 L). Le nhlanganisela ubiliselwe at ukushisa low amahora ama-2 kanti ibangele njalo. Awukwazi uwulethe ngamathumba. Ungqimba kwaphumela is elicwengekileyo akhanywa ngokusebenzisa indwangu. I soymilk etholwe ingezwe isixazululo 0.5 tsp citric acid kanye 2 tbsp. iingobho zamanzi abilisiwe. Ngemva mass curd zihlale ngesihlungo ngendwangu futhi zabekwa umthwalo wakhe. Emva lwaluyophola, ushizi wafakwa esiqandisini
Zucchini Amnandi Futhi okunempilo phezu hlupha: I zokupheka umhlabeleli
Iphepha ikhekhe pan. zokupheka amakhekhe
Izikebhe satsebeli: iresiphi for the ebusika
Recipe amaprotheni ukhilimu ukuhlobisa amakhekhe ngezithombe
Lesi sakhiwo wePhalamende Hungarian - ukukhangana eyinhloko Budapest
Imbangela isikhathi, kumnandi: IzAga Inani
Isidakamizwa "i-Gelomirtol forte." Imiyalo